I-KDE Gear 21.08 ifika nemisebenzi emitsha kuseto lweeapps | Ubunlog
Kudala-dala, xa iMetallica yakhupha iMagnetic yokufa kwayo, ndabona okokuqala into eyenziwa ngabazobi abaninzi ngoku: babonisa iingoma ezintathu ngaphambi kokuba i-albhamu ikhutshwe njengentengiso. Lonto indincedile ndafunda ukuba sisithethe endingasithandiyo, kuba ndiye ndigqibe "ngokutshisa" ezo ngoma zintathu kwaye, xa ndimamele icwecwe lonke, ezo ngoma zivakala zingaqhelekanga kum. Yiloo nto bendicinga ngoMvulo ezinye iividiyo abathumele ngazo I-KDE yezixhobo 21.08.
Iindaba zanamhlanje zezokuba iK Usungule uthotho olutsha olusetiweyo losetyenziso lwakho, kwaye oko kuthetha imisebenzi emitsha ifika. Ukuba ndibeke izimvo kumculo, kungenxa yokuba ngoMvulo bapapashe ividiyo ngeDolphin (enyeNgoLwesibini ngolunye lweKonsole (enye) kwaye izolo ngoLwesithathu omnye malunga no-Elisa (enye). Intengiso nganye inesitayile, kodwa into ebalulekileyo luluhlu lwesishwankathelo onalo ngezantsi. Kukho iindaba kwi amanqaku evekini kwinto entsha esebenza ngayo iprojekthi.
Amagqabantshintshi eKDE Gear 21.08
Ukuba ifolda iqulethe iifayile ezininzi zokujonga kuqala, ukulandelelana kokuboniswa kwangaphambili kuya kuboniswa ukuze sikwazi ukukhangela ukuba ifolda iqulethe into esiyifunayo.
Ikhowudi yokujonga kwangaphambili kweDolphin ikwenziwe ukuba ilungiselelwe kule nguqulo kwaye iithonjana ngoku zibonakale ngokukhawuleza.
Ulwazi olukwiphaneli esecaleni (F11) ngoku luhlaziywa ngexesha lokwenyani.
Okular ngoku ifikeleleka ngokulula ekuphatheni amaxwebhu, incwadi kunye neehlaya, phakathi kolunye utshintsho oluza kwenza ukuba umbonisi woxwebhu lwe KDE asebenzise ngokulula.
Ukujonga kwangaphambili kunwenwela kwimifanekiso kunye neefolda. Ukuhambisa ngaphezulu kwifolda kuya kuwuphonononga umxholo wayo. Oku kuluncedo kakhulu xa sifuna ukuqinisekisa ukuba siyakopa, sihamba okanye sisusa into echanekileyo.
Ukuchofoza kwifayile kwaye iya kuvulwa kwisicelo sayo esihambelanayo: umfanekiso uya kuvulwa kumbukeli njengoGwenview, i-PDF iya kuvula kumbonisi woxwebhu njengo-Okular, okanye ifayile ye-MP3 iya kuvula kwisidlali somculo njengo-Elisa, umzekelo.
Ulawulo oluhlanganisiweyo emazantsi ekunene ekusondeleni, phakathi kwezinye izinto.
elisa ngoku ungangena kwimowudi yepati ngeqhosha (Fn) F11. Ngexesha leempelaveki, yenye yezonaapps bathetha ngazo kwaye bayiphucula kakhulu rhoqo kwiinyanga ezine.
Ngoku ungathatha izikrini zefestile apho isikhombisi sikunye neMETA + Ctrl + ImpPt.
Ukunyaniseka okukhulu kunye nesantya eWayland.
Kate-Iziqwengana ngoku kulula ukuzifumana njengoko zinokufumaneka kudidi lwazo kuVumbulula (isixhobo se KDE solawulo lwesoftware). Ukongeza, iProthokholi yoLwimi lweKate (LSP) ngoku ixhasa ulwimi lwenkqubo yeDart.
IKdenlive ufudukele kwi-MTL 7.
KDE Qhagamshelana ifikelele kwiVenkile kaMicrosoft.
Yakuake ngoku ikuvumela ukuba utshintshe ukusuka kwelinye ipaneli uye kwelinye kunye namaqhosha e-Ctrl + Tab. Kulabo abangayaziyo, sisiphelo esihla sivela phezulu njengaleso somdlalo wevidiyo weQuake (yiyo loo nto igama laso)
Ngoku ibonisa isikrini esamkelekileyo ukuba siyivula ngokuthe ngqo, ngaphandle kokwenza nayiphi na ifayile.
Inkxaso yokucinezelwa kweefayile ezinemivalo efana ne-Windows njengokwahlulahlula.
I-KDE Gear 21.08 ibikhona Ikhutshwe kwimizuzu embalwa edlulileyo, ke abaphuhlisi ngoku banokuqala ukusebenza kunye nekhowudi yabo. Sele zifumaneka kwi-KDE neon, kwaye kulindeleke ukuba kamva, mhlawumbi ngenyanga (okanye ezimbini) baya kufika kwi-Backports PPA. Ukufika nini ukufikelela kolunye unikezelo kuya kuxhomekeka kwimodeli yabo yophuhliso okanye kwifilosofi yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » Emva kokubhengezwa kathathu, i-KDE Gear 21.08 ifika inemisebenzi emitsha yokuseta kweprojekthi yeeapps
Iitampu, fakela le app yomnombo ngokusebenzisa iPappak
Isiseko se-OS 6 "Odin" sifika senziwe ngokutsha, utshintsho olukhulu kunye neempawu ezininzi ezintsha